Sidee Blockchain u shidaal siin doonaa Isbadal ku yimaada Warshadaha E-Ganacsiga | Martech Zone
Sidee Blockchain u shidaal siin doonaa Isbadal ku yimaada Warshadaha E-Ganacsiga
Arbacada, Nofeembar 7, 2018 Ankit Patel
Sida sida kacaanka e-commerce uu ugu dhacay xeebta dukaamaysiga, diyaar u noqo isbeddel kale oo ku yimaada qaabka teknoolojiyadda xannibaadda. Si kasta oo ay yihiin caqabadaha ka jira warshadaha e-commerce, xannibaadda ayaa ballanqaadaysa inay wax badan ka qabanayso iyaga isla markaana u fududaynayso ganacsiga iibiyaha iyo sidoo kale iibsadaha.
Si aad u ogaato sida xannibaadda ay faa'iido fiican ugu yeelan doonto warshadaha ganacsiga e-commerce, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka tiknoolajiyada xannibaadda iyo dhibaatooyinka ragaadiyay warshadaha ganacsiga e-commerce.
Maxay yihiin faa'iidooyinka tiknoolajiyada xannibaadda?
Xannibaadda ayaa ah kaydinta buugaagta macluumaadka ee baahsan. Macaamillada iyo xogta si otomaatig ah ayaa loogu kaydiyaa noodhka ka qaybqaataha.
Macaamillada ay tahay in lagu galo diiwaanka ama baloogga waxaa ansaxiyay kaqeybgalayaasha kale. Tani waxay ka dhigeysaa mid lagu kalsoonaan karo.
Macaamillada waxaa qori kara oo keliya ka qaybgalayaasha idman taasoo ka dhigaysa mid ammaan ah oo aan la carqaladeyn karin.
Buugga ayaa si elektiroonig ah loo duubay si xogta ay u ahaato mid sugan.
Isku xirnaanta baloogyada waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la beddelo waxyaabaha ku jira dhismaha.
Macaamillada ama xogta waa waqti shaabadaysan. Marka macaamilku waa lala socon karaa taariikhda uu soo galay ee asalka ah.
Qandaraasyada caqliga lihi waa kuwa ay macaamilku si otomaatig ah u kiciyo haddii iyo haddii kaliya haddii la buuxiyo shuruudo.
Sidee xannibaadda u beddeli doontaa warshadaha ganacsiga e-ganacsiga?
Bixinta ayaa ka jaban - Khidmadaha lacag bixinta ee shirkadaha kaararka iyo bangiyaduba aad u sarreeyaan. Tan ka sokow, aagagga ganacsiga e-commerce waxay sidoo kale ka qaadaan khidmadaha tafaariiqleyda wixii macaamil ah ee la sameeyo. The technology blockchain ayaa lagu wadaa inuu hoos u dhigo khidmadaha wax-qabadka iyo iibka iyadoo la siinayo macaamil qiime jaban. Heerarka amniga ayaa sidoo kale sare u kici doona si tafaariiqdu ugu istaago inuu ka faa'iideysto.
Raadinta Bixinta Qalabka iyo Xakamaynta Waxyaabaha - Badeecada laga helo dukaanka tafaariiqda e-commerce ka dibna mar kale halkaas laga sii geeyo macmiilka waa hawl daallan oo la maareynayo. Waaxda bakhaarka waa inay qiimeeyaan kaydka la keenayo iyo kuwa la keenayo. Waxaa jiri kara dhibaato khayaano ah oo lala imanayo alaab liita. Laakiin tiknoolajiyada xannibaadda, barnaamijka ganacsiga e-commerce wuxuu la socon karaa dhaqdhaqaaqa alaabta iyo dib uga soo noqoshada dhismaheeda. Sidoo kale, maadaama xogta la duubay ay tahay mid hufan, khalad kasta oo ku jira tirada ama tayada waa lala socon karaa. Tani waxay faa'iido u noqon doontaa tafaariiqle, madal e-commerce iyo macaamiil.
Xakameynta alaabada - Mid ka mid ah dhibaatooyinka ka jira ganacsi kasta oo la xiriira alaabooyinka waa tan kantaroolka agabka. Waxyaabaha ku jira kaydka waa in dib loo buuxiyo oo loo maareeyo. Halkan, xannibaadda ayaa ka caawin karta warshadaha elektaroonigga ah maareynta alaabada. Adoo kudaraya qandaraasyo caqli gal ah xannibaadda, tirakoobka waa la maareyn karaa. Shayga si otomaatig ah ayaa looga dalban karaa tafaariiqda marka la gaaro xadka horay loo qeexay (xadka ugu yar). Tani waxay xaqiijineysaa in dukaanka uusan laheyn wax soo saar xad-dhaaf ah sidoo kalena uusan oollin.
Amniga Xogta - Xogta ay ururinayso goobaha ganacsiga e-ganacsiga ku sii jir xogtooda Laakiin macmiilku wuu lumay maadaama xogtan ay marar badan a-jeer si khaldan u adeegsadeen ganacsatadan ganacsiga e-commerce. Sidoo kale, waxaa jira suurtagal kasta oo nidaamka lagu jabsado iyo keydka xogta la xado. Macluumaadka xasaasiga ah sida lambarka kaarka deynta iyo macluumaadka shakhsiyeed ayaa halis ku jira. Nidaamyada ganacsiga e-commerce ma aha oo kaliya inay keydiyaan macluumaadka macaamiisha laakiin kuwa tafaariiqleyda sidoo kale. Laakiin tikniyoolajiyada xannibaadda, xogta waxay ku jirtaa node kasta oo macaamil ah. Waa nidaam baahsan oo xogta lama badali karo lamana lumin karo.
Daacadnimada iyo Abaalmarinta - Iyada oo la adeegsanayo xannibaadda, way fududaanaysaa in lala socdo wadarta iibsiga uu sameeyay macmiilka iyo dhibcaha daacadnimada ay kasbadeen. Taariikhda wax iibsiga iyo dhibcaha la kasbaday iyo kuwa la soo furtay ayaa si badbaado leh loogu keydiyaa buugaagta loo qaybiyey ee xannibaadda. Abaalmarinta qiimo dhimista iyo dhibcaha dhibcaha si toos ah ayaa loogu dejin karaa qandaraasyada caqliga leh.
Dammaanadaha iyo Rasiidhada Iibsiga - Iibsashada, waxay la timid madax xanuun si taxaddar leh u keydinta kaarka dammaanadda iyo risiidka iibsashada. Xannibaadda ayaa kor u qaadaysa kaydinta rasiidka iibsiga si adeegyada dammaanadda loo heli karo. Xannibaadda ayaa si fudud u kaydin karta oo ula socon karta xogta taas oo u oggolaanaysa caddaynta lahaanshaha alaabooyinka ama adeegyada.
Faallooyinka dhabta ah - Faallooyinka laga sameeyay meheradda e-commerce waxay ku xiran yihiin su'aalo badan. Dukaammada ganacsiga elektaroonigga ah uma furna dib u eegista lagu dhejiyay halkaas qofna ma hubo haddii ay dhab tahay. Iyada oo dhammaan madmadowga ku saabsan dib u eegista, tiknoolajiyada xannibaadda ayaa ka caawineysa xallinta dhibaatada dib u eegista. Waxay ka caawineysaa in la xaqiijiyo dib u eegista oo la ogaado haddii ay tahay mid dhab ah oo daacad ah. Macaamiisha waxaa lagu dhiirrigelin karaa inay wax ka qoraan alaabada ay iibsadaan. Abaalmarinta, weliba, waxaa lagu sameyn karaa iyada oo loo marayo boorsooyinka dhijitaalka ah ee ku yaal xannibaadda.
Hababka Lacag Bixinta Kale - Goobaha elektaroonigga ah waxay macaamiishooda u fidiyaan qaabab lacag bixin oo kala duwan sida COD, kaararka iyo boorsooyinka moobillada. Laakiin haddii lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' loo soo bandhigo qaab lacag bixin ah, markaa waxay siisaa faa'iidooyin dhowr ah hababka dhaqameed ee lacag bixinta. Habka lacag bixinta ayaa ka dhakhso badan oo lagu kalsoonaan karo. Khidmadaha wax-soo-saarka ayaa ka hooseeya. Ma jirto cabsi ah in macaamil ganacsi la beddelo oo si khaldan loo isticmaalo haddii ay dhacdo bixinta kaararka. Iyada oo la adeegsanayo cryptocurrency, baahida loo qabo ansixinta dhinac saddexaad ayaa la baabi'inayaa.
Warshadaha elektaroonigga ah waa kuwo aad u tartamaya, websaydhyada tafaariiqda iyo ganacsiga ee elektaroonigga ah ayaa fiirinaya habab iyo macne ay uga horreeyaan dhiggooda Marka, ganacsatadu waa inay qaataan farsamooyinka ganacsi ee xariifka ah si ay ugu sii jiraan tartanka.
Tikniyoolajiyadda xannibaadda waxay bixisaa qaab-dhismeed sax ah oo wax walba ka dhigaya mid fudud oo fudud. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada xannibaadda, dhammaan daneeyayaasha ku jira warshadaha ganacsiga e-ganacsiga waa hubaal inay ka faa'iideysan doonaan mustaqbalka fog.
Tags: lacag bixinno kaleblockchaincryptocurrencyData Securitye-commercelacagaha ecommercexakamaynta alaabadadaacadnimohababka bixintaiibso risiidhadaReviewsabaalgudyosilsiladdadamaanado
Ankit Patel waa Maamulaha Suuqgeynta / Mashruuca Teknolojiyadaha XongoLab iyo PeppyOcean, kuwaas oo bixiya xalka ugu sarreeya adduunka iyo xalka horumarinta barnaamijyada moobiilka adduunka. Hiwaayad ahaan, wuxuu wax ka qoraa tikniyoolajiyad cusub oo soo socota, horumarka mobilada, horumarinta webka, aaladaha barnaamijyada, iyo ganacsiga iyo qaabeynta webka.
Sida Loogu Kordhiyo Isticmaalaha Google Analytics